mawatchOS 7 anowanikwa munaGunyana 16 kubva munhevedzano 3 | Ndinobva mac
Apple yakazivisa pachiitiko chanezuro musi wa15, kuti iyo nyowani yekushandisa iyo wachi, yeApple Watch, ichave iripo kubva Gunyana 16 kune vese vateereri. Ichave iripo mazuva maviri isati yatanga kuvhurwa zviri pamutemo, iyo yakarongerwa kuve munaGunyana 18. Gadzirira watchOS 7, kana usina Beta yakaiswa.
mawatchOs 7 ichave yakagadzirira vashandisi vese kubva munaGunyana 16. Mazuva mashoma chete pamberi pekumisikidzwa zviri pamutemo kweApple Watch nhevedzano 6 yakaziviswa nezuro pachiitiko cheApple. Isu tinoziva kuti iyo nyowani vhezheni yewatch inouya nezvimwe zvinoshamisa, senge nyowani maviri mavara (bhuruu uye tsvuku) uye aine tambo nyowani. Isu tinewo wehupfumi muenzaniso, iyo Apple Tarisa SE. Asi vese vachatakura nyowani yekushandisa system, vhezheni 7.
Mune ino software nyowani, isu tichaona, semuenzaniso, kuongorora kurara, iyo 20-yechipiri kadhi yekuwachisa mawoko uye matsva dials iwe aunokwanisa kuchinjika kune wachi. Spheres iwe aunogona kuwana muApple Chitoro uye kunyangwe pasocial network.
Chiyero cheoxygen muropa, isu tatoona mune betas kuti ingave iri nyaya ye Hardware pane software, saka kana iwe uchida kunakirwa neiyi tekinoroji, iwe uchafanirwa kubhadhara kubva ku429 euros, nekuti mune SE modhi haungakwanise kunakidzwa neichi chinhu chitsva.
watchOS 7 ichave iripo yeApple Watch nhepfenyuro 3 zvichienda mberi uye sekureba uine iPhone 6s kana gare gare uye neIOS 14, iyo zvakare yakarongerwa kuvhura pazuva rimwe chete, Gunyana 16.
Saka unoziva, zvave zvakakodzera kumirira, nekuti isu tiri pasi pezuva rimwe kubva pakuburitswa. Teerera kune ruzivo rwewachi yako uye kana iyo yekuvandudza isingaonekwe otomatiki, unogona kuitsvaga nemaoko, kubva pazvirongwa zve iPhone uye nekushandisa wachi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » mawatchOS 7 anowanikwa munaGunyana 16 kubva pane akateedzana 3
Fitness + Apple's premium Workout service pane yako iPhone uye Apple Watch